Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hafatra anatiny an'ny Boeing: jet 737 MAX 'noforonin'ireo mpitsabo'
Boeing dia namoaka cache hafa an'ny orinasan'ny orinasa anatiny izay manondro ny goavambe Aerospace amerikana nandainga tamin'ny mpanara-dalàna momba ireo olana ireo 737 MAX fiaramanidina.
Tao anatin'ny fanambarana iray navoaka niaraka tamin'ireo antontan-taratasy, ny mpanamboatra fiaramanidina dia nifona "tamin'ny FAA, Kongresy, mpanjifan'ny kaompaniam-pitaterana anay ary ho an'ny daholobe manidina" noho ny "atiny amin'ireny fifandraisana ireny" , raha vantany vao vita ny hevitra ilaina. ”
Vao navoaka BoeingNy hafatry ny orinasa anatiny dia mampiseho fanakianana mahery vaika avy amina mpiasa tsy fantatra anarana, izay nilaza fa ilay fiaramanidina MAX 737 izay voadona dia “noforonin'ny badisy.”
Tamin'ny famoahana ireo fifandraisana nolavina tamin'ny alakamisy taorian'ny fanadihadiana anatiny, dia nanaiky i Boeing fa ny sasany amin'ireo hafatra dia "tsy azo ekena" ary misy "teny mandranitra". Tamin'ny fandefasana hafatra iray nalefa tamin'ny 2017, ny mpiasa iray dia nanala ny 737 MAX - izay natsangana manerantany tamin'ny volana martsa lasa teo taorian'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona roa - namono ny mpamolavola azy sy ny "mpanara-maso", izay toa manondro ireo mpanao lalàna federaly.
Tsy voatonona anarana ilay mpiasa, ary tsy fantatra mazava izay olana hitany tamin'ny MAX tamin'izany fotoana izany.
Hafatra iray hafa fanamelohana nalefa tamin'ny taona 2018 no mampiseho mpiasa iray miady amin'ny olana ara-etika, milaza amin'ny mpiara-miasa aminy hoe "Mbola tsy navelan'Andriamanitra aho noho ny fisarontsaronana nataoko tamin'ny taon-dasa," ny firesahana iray hafa momba ny fifandraisan'ny orinasa amin'ny Federal Aviation Administration ( faa).
Ho fanampin'ny rafitra fanaraha-maso ny sidina diso izay heverina fa nahatonga ny fianjerana roa MAX, ireo simulator fiaramanidina fiaramanidina koa dia nodoran'ny mpiasa tao anaty hafatra anatiny.
“Hametraka ny fianakavianao amin'ny fiaramanidina Max simulator voaofana ve ianao? Tsy hanao izany aho, ”hoy ny fanontanian'ny mpiasa iray amin'ny mpiara-miasa aminy, izay namaly tsotra hoe:“ Tsia. ”
Na izany aza, ny mpitondra tenin'ny FAA dia nanamarika fa ireo antontan-taratasy dia tsy manambara loza mety hitranga amin'ny fiarovana amin'ireo simulator 737 MAX, na eo aza ireo kaomina mety hanameloka ny mpiasa miafina ny olana amin'ny maso ivoho.
Seranam-piaramanidina ratsy indrindra sy zotram-piaramanidina mikorontana indrindra amin'ny 2019